HomeWararka MaantaSadaal : Shanta Dal ee Afrcia u metalayaa koobka Aduunka
Ciyaaraha kubada cagtu waxay noqdeen dhacdooyinka ugu caansan ee ka dhaca dunida aynu ku nool nahay, waxaa isi soo tarayaa maalinba maalinta ka danbaysa tageerida iyo xiisaha kubada Cagta guud ahaan aduuunka gar ahaan qaarada africa ee aynu ku nool nahay.
Waxaa ugu qayb galayaa dalalka Africa koobka aduunka shan dal oo tartan dheer ka dib ku Guulaystay in ay ka mid noqdaan xululka koobka aduunka ciyaaraya.
Waxaa ugu awood badan dalka Ivorycoast oo wata ciyaartoy khibrad badan leh oo uu Horkacaayo Yaya Toure oo u ciyaara kooxda Manchester City ee ka dhisan dalka Ingriiska.
Waxaa iyana aan dabyar shidayn xulka Ghana oo lagu naanayso xidigaha madaw, xulka Ghana Waxaa uu labadii koob aduun ee u danbeeyey ka gudbay groups ka isaga oo ku kala hadhay Labada wareeg ee ku xiga groupska, waxaana sanadkan la filayaa in uu muujin doona wacdaro Isaga oo la group ah Germany iyo Portugal oo Yurub ah, si kasta oo ay labadan xul uga awood Badan yihiin dalka Ghana hadana culumada kubada cagtu waxay sadaalinyaa in ay xidigaha madaw ka soo gudbi karaan groupkan.
Labada dal ee Cameroon iyo Algeria ayaa iyana ka mid ah xululka africa u meteli doona koobka Aduunka labadan xul malaha awood sidaa u sii badan, had iyo jeerna marka ay yimadaan koobka Aduunka way ku adag tahay in ay soo dhafaan groupska. Cameroon waxay wadada oo hogaamiye u ah xidigeeda dadweyn Eto,o.
Nigeria maaha mid sadaal laga bixin karo awodeeda kubadeed,waxay kubada Nigeria isku Badashaa si fudud waxay marar qaar noqdaan kuwo guul soo hooya, waxaana horkacaya xidiga Mouses ee reer liverpool iyo Micheal Obi.
Croatia way garanaysaa sida loo istaajiyo Brasil
12/06/2014 Abdiwahab Ahmed